စျေးပေါသော ICE ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါသော ICE ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း
နေအိမ် > စျေးပေါသော ICE ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများစျေးနှုန်း
ဤတွင်သင်ဂျာမနီရဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါတဲ့ ICE ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် ICE ခရီးသွားစျေးနှုန်း နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် ICE
2. ICE ရထားအကြောင်း 3. စျေးပေါတဲ့ ICE ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. ICE လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲo ICE ရထားစီးပါ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. ICE ရှိ Standard Class နှင့် First Class အကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ 7. ICE ကြေးပေးသွင်းမှုရှိပါသလား
8. ICE ရထားမထွက်ခွာမီဘယ်လောက်ကြာမလဲ 9. ICE ရထားဇယားကဘာလဲ
10. ဘယ်ဘူတာတွေကို ICE ကတာဝန်ယူတယ် 11. ICE Trains မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် ICE
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိအမြန်ဆုံးရထားသည် ICE ရထားဖြစ်သည် အမြန်နှုန်း 300km / hr ဖြင့်.
T ကဂျာမန်ရထားလမ်းစနစ်၏အထင်ကရ ICE ရထားသည်ဂျာမနီရှိမြို့တိုင်းကိုဆက်သွယ်သည်.
ရထားအားလုံးမှာ ဂျာမန်ရထားလမ်းစနစ်, ICE သည်အမျိုးအစားအေတစ်ခုဖြစ်သည်.
ICE ၏နိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းများတွင်ပြင်သစ်တို့ပါဝင်သည်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဒိန်းမတ်, သြစတြီးယား, နယ်သာလန်, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်.
Intercity-Express သို့မဟုတ် ၄ င်း၏ shortcut အမည်ဖြင့် ICE သည်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား အဆိုပါ Deutsche Bahn ကပိုင်ဆိုင်သည်, ဂျာမနီရဲ့အမျိုးသားရေးရထားပံ့ပိုးပေး. အဆိုပါ ICE ရထား ဇိမ်ခံလူသိများကြသည်, မြန်နှုန်း, သူတို့ဂျာမနီ၌ရှိသမျှသောမြို့ချိတ်ဆက်အဖြစ်နှင့်သက်သာခြင်း.
တစ်နာရီ ၃၀၀ ကီလိုမီတာအထိမြန်နှုန်းနှင့်အတူ, ICE ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည် Cologne နှင့် Hamburg ကဲ့သို့သောဝေးလံသောမြို့များသို့သွားရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
ICE ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ ဂျာမနီမှကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်. ရထားဟာသြစတြီးယားကိုနိုင်ငံတကာလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာပြေးဆွဲနေတယ်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဆွစ်ဇာလန်, ဒိန်းမတ်, နှင့်နယ်သာလန်.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ ရေခဲပြင်ရထားများအတွက်လက်မှတ်တွေရထား
စျေးပေါတဲ့ ICE ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ ICE လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာထားပါ
သင်ရချင်တယ်ဆိုရင် စျေးပေါ ICE လက်မှတ်တွေ, စောစောသူတို့ကိုသင်ဝယ်, စျေးပေါသောသူတို့ကိုရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသာ. ရှိပါတယ်3စျေးသက်သာသည့် ICE ခအမျိုးအစားများနှင့်လက်မှတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးစလုံးကိုကန ဦး ရောင်းချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ချွေတာနှုန်းထားများ, စီးပွားရေးစျေးနှုန်း, ထွက်ခွာသွားသောနေ့နီးသည်နှင့်အမျှ Super sparpreis မရနိုင်ပါ. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခလက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ်6မထွက်ခွာမီလများ.
ဂဏန်း 2: သင်၏ခရီးစဉ်သေချာကြောင်း ICE ရထားလက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
သင်၏ခရီးနှင့်ထွက်ခွာမည့်နေ့ရက်ကိုသေချာစွာသိထားခြင်းကသင့်အားငွေပြန်အမ်းခြင်းအတွက်ငွေသက်သာစေလိမ့်မည်. ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှုန်းနှင့်အသုံးမပြုသည့် ICE လက်မှတ်များပြန်အမ်းခြင်းသည်သင်ဝယ်သောလက်မှတ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်. လည်း, ပုံမှန်လက်မှတ်လက်မှတ်များထက်ငွေကျပ်လက်မှတ်များအတွက်ပြန်အမ်းငွေမှာပိုနိမ့်သည်. သင်၏လက်မှတ်ပြန်လာသောအခါ DB သည်သင့်အားငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ. DB ပြန်အမ်းငွေကို DB ဘောက်ချာများမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်, သူတို့ပေးသောမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်. သင့်ကိုလည်းရောင်းနိုင်ပါတယ် ICE ရထားလက်မှတ်တွေ ပိုက်ဆံပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်အင်တာနက်ဖိုရမ်တွေမှာ online.
ဂဏန်း 3: အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်များအတွင်း ICE ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်း
ICE လက်မှတ်များသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါစျေးသက်သာသည် (အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေး, နှင့်စနေနေ့). အထွတ်အထိပ်နေ့ရက်များအတွင်း, စျေးပေါတဲ့လက်မှတ်တွေကအရမ်းမြန်တယ်, Flexpreis လက်မှတ်များကိုသာချန်ထားခဲ့သည်. Peak ရက်များ၌ခရီးသွားရန်, ကြိုတင်စာရင်းသွင်း။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ. သငျသညျချွေတာခလက်မှတ်တွေမရနိုင်လျှင်, မနက်နှောင်းပိုင်းနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းအကြားခရီးသွားရန်သေချာပါစေ (စီးပွားရေးခရီးသွားများကြောင့်ဖြစ်သည်) ထို့နောက် Flexpreis လက်မှတ်တွေစျေးနှုန်းချိုသာလိမ့်မယ်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ခရီးသွားခြင်းကိုရှောင်ပါ အများပြည်သူ နှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ ICE လက်မှတ်စျေးနှုန်းများလည်းတိုးမြှင့်မယ်လို့အဖြစ်.
ဂဏန်း 4: သင်၏ ICE လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ICE ရထားလက်မှတ်၏အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်, တစ်ဦးကရထား Save. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာတွင်ရထားလက်မှတ်အများဆုံးဝယ်ယူမှုများရှိသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရေမတွက်နိုင်သောရထားလမ်းအော်ပရေတာများနှင့်ညာဘက် algorithms မှဆက်သွယ်မှု, ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်စျေးအသက်သာဆုံး ICE လက်မှတ်တွေကိုဆက်ကပ်. လည်း, ကျနော်တို့ ICE ထက်အခြားရထားများအတွက်စျေးပေါအခြားနည်းလမ်းရှာပါ.
ICE လက်မှတ်၏စျေးနှုန်းသည်လက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့်သင်လိုချင်သောထိုင်ခုံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ဂျာမန်ရထားလမ်း ယင်း၏ကျော်ကြားသည် ICE လက်မှတ်ဈေးနှုန်းနိမ့်. ICE ရထားတွင်လက်မှတ်အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည် - စံသို့မဟုတ် Flexpreis လက်မှတ်, အဆိုပါ Supersaver ခလက်မှတ်တွေသို့မဟုတ် Supersparpreis, နှင့်ချွေတာခသို့မဟုတ် Sparpreis ICE လက်မှတ်တွေ. ချွေတာခလက်မှတ်သည်စံလက်မှတ်များထက်စျေးသက်သာသည်, ထွက်ခွာသွားသောနေ့နီးသည်နှင့်အမျှရရှိနိုင်လက်မှတ်တွေလျှော့ချ. ICE လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ သင်ရွေးချယ်သည့်အတန်းပေါ်မူတည်သည်။ ဤနေရာတွင်အတန်းတစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းများ၏အကျဉ်းချုပ်ဇယားဖြစ်သည်:
စံ 17 € – 50 € 30 € – 120 €
ဆု 21 € – 70 € 58 € – 152 €
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 40 € – 87 € 80 € – 180 €
ခရီးသွားလမ်းကြောင်းများ: ဘာကြောင့် ICE ရထားစီးတာပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ?
1) ဘော်ဒါဆောင်အကြိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှောင်ပါ. မင်းမှာလေယာဉ်စီးမယ်ဆိုရင်9နံနက်, သင်အနည်းဆုံးအားဖြင့်လေဆိပ်မှာဖြစ်ခြင်းချွတ်ပိုကောင်းပါတယ်7အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်ကြိုတင်ဘော်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကိုဖြတ်သန်းရမည့်အချိန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်, သင်လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန်နီးပါးအချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.
ICE ရထားတွေနဲ့, သင်မထွက်ခွာမီမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ရောက်ရှိနိုင်သည်. Pre-Boarding လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ရှည်လျားသော - အကွာအဝေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများမရှိသောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်နိုင်သည်. ရုံဘူတာရုံအထိပြသပါ, သင့်ရဲ့ရထားကိုညွှန်ပြချက်အပေါ်နေရာချထား, နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့!
စုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်, ICE သည်ဂျာမနီရှိလေယာဉ်ပျံများကိုကျော်ပြီးအနိုင်ရသကဲ့သို့ပင်စျေးနှုန်းလည်းကျသည်. ဘေးဖယ်အချိန်မှစ။ Pre- ဘော်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ဖြုန်းတီး, လေယာဉ်ပျံများပိုမိုကျဆင်းသည် ခရီးသွားအချိန် အသွားအပြန်အတွက် (လေဆိပ်ကနေအတိအကျတည်နေရာ).
2) ခရီးဆောင်အိတ်များ. သင်သည်လေယာဉ်ပျံပေါ်တွင်ခရီးသွားလျှင်ခရီးဆောင်သေတ္တာများအတွက်အပိုပေးချေလိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အကယ်၍ သင်သည်ခရီးဆောင်အိတ်များ ICE ရထားဖြင့်ခရီးသွားလျှင်အပိုကုန်ကျမှုတစ်ခုဖြစ်လျှင်သင် ၀ ယ်လျှင်သင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ စျေးပေါ ICE ရထားလက်မှတ်တွေ. ရှင်းလင်းဖို့, နှင့် စျေးပေါ ICE စျေးနှုန်းများ, သင်ခရီးသွားလာသည့်ခရီးဆောင်သေတ္တာတစ်လုံးအတွက်သင်ပေးရန်မလိုပါ. ဒါက ICE ကိုစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ခရီးသွားလာနိုင်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်စေတယ်.
3) ရထားများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်. အဆိုပါ ICE ရထား လည်းဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လေယာဉ်ထက်, သောလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်. ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်လေကြောင်းဖြင့်ခရီးသွားခြင်းထက်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ၂၀ ×လျော့နည်းသည်.
ICE ရှိ Standard Class နှင့် First Class အကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ?
ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများအတွက်လက်မှတ်နှင့်အတူအခြားရထားများနှင့်မတူဘဲ (စံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, အလုပ်အမှုဆောင်, စသည်တို့ကို) Trenitalia ၌ရှိသကဲ့သို့, ဂျာမနီရဲ့ ICE နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်. ICE ရထားတိုင်းမှာသင်တန်း ၂ ခုရှိတယ်။ ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်း. အမျိုးအစားနှစ်ခုအကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာစျေးနှုန်းဖြစ်သည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
ICE ရထားရှိလက်မှတ်နှင့်အတန်းအခန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်, မည်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစားကိုပထမ ဦး ဆုံးအတန်းထဲတွင်ရှိနိုင်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာပင် စျေးပေါ ICE ရထားလက်မှတ်တွေ, အဆိုပါချွေတာစျေးနှုန်း, နှင့် Super sparpreis ပထမတန်းစားထိုင်ခုံတတ်နိုင်သည်. သို့သျောလညျး, စျေးနှုန်းနှစ်ခုစလုံးအတန်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်, အထက်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်.
ပထမတန်းစား ICE လက်မှတ်:
ICE ၏ပထမတန်းစားသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်, သက်သာခြင်း, နှင့်ဂျာမန်မီးရထားစနစ်အတွက်ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှု. လေယာဉ်များကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဒီဇိုင်း, ICE ရထားများသည်ခရီးဝေးအတွက်နှစ်သိမ့်မှုပေးသည်. ထို့အပြင်, ပထမတန်းအခန်းများသည်ရထား၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး ICE ရထားပေါ် မူတည်၍ အခန်း ၃ ခန်းအထိရှိနိုင်သည်.
ပထမတန်းစားအခန်းထိုင်ခုံများသည်ပိုမိုကြီးမားပြီးကွဲပြားခြားနားစွာစီစဉ်ထားသည် 2-1 အစားအစီအစဉ် 2-2 ဒုတိယလူတန်းစား၌တည်၏. ဒီဟာကခရီးသည်တွေအတွက်ပိုမိုအတန်းမှာနေရာလွတ်ပေးသည်. ထို့အပြင်, ICE ၏ပထမတန်းစားထိုင်ခုံများသည် faux သားရေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးဒုတိယလူတန်းစားများထက်ပိုမိုကြီးမားသည်. ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးသမားများသည်ပထမတန်းစားကိုသုံးသည်, ခရီးစဉ်တွင်အချို့သောအလုပ်များလုပ်လိုသောခရီးသည်များအတွက်ခိုင်မာသောစားပွဲများရှိသည်.
ICE ရထားနှင့်ပထမတန်းကိုခွဲခြားသောအပို ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်, နေ့စဉ်သတင်းစာများ, အခမဲ့န့်အသတ် WI-FI ကို, နှင့်ဆဲလ်ဖုန်း reception ည့်ခံခြင်းအတွက်ပြတ်တောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အထူးချဲ့စက်များ. ရထားပေါ်ရှိစားသောက်ဆိုင်သို့မသွားလိုလျှင်ပထမတန်းစားခရီးသည်များသည်လည်းသူတို့ထိုင်ခုံများမှအစားအစာများကိုမှာယူနိုင်သည်.
ICE ပထမတန်းစားခရီးသွားများအတွက်ကန့်သတ်ထားသည့်နောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုမှာ ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထား. ပထမတန်းစားလက်မှတ်အားလုံး, အဆိုပါအပါအဝင် စျေးပေါ ICE လက်မှတ်တွေ, ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားပါ. သင်ကျပန်းပြတင်းပေါက်ထိုင်ခုံရရှိရန်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ; သင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်လိုသည့်နေရာတွင်သင်ထိုင်လိုသောနေရာကို ရွေးချယ်၍ သီးသန့်ထားနိုင်သည်.
ဒုတိယအတန်းအစား ICE လက်မှတ်:
ဒုတိယအတန်းအစားအခန်းနှစ်သိမ့်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားကနေဝေးဝေးမရှိကြပေ. ဖြည့်စွက်ကာ, ဒုတိယတန်းစားအခန်းရှိထိုင်ခုံများသည်ပျမ်းမျှလေကြောင်းလိုင်းထိုင်ခုံများထက်ပိုကောင်းသည်. Plus အား, သူတို့ ergonomic ဖြစ်ကြသည်, တစ်ခေါင်းစီးနှင့်အတူလာ, နှင့်ပုံစံထည်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. ဤသည်အဆင်ပြေအကွာအဝေးခရီးစဉ်စေသည်.
ပထမတန်းအစားရထားများထက် ICE ရထားတွင်ဒုတိယတန်းအခန်းများပိုရှိသည်. အထူးသဖြင့်, ဒုတိယတန်းရှိထိုင်ခုံအစီအစဉ်သည်ပထမတန်းစားအခန်းထက်အနည်းငယ်တင်းကျပ်သည်. တစ်တန်းမှာထိုင်ခုံလေးခုံရှိတယ် (2-2 ထိုင်ခုံအစီအစဉ်), တိုင်းနှစ်ခုထိုင်ခုံအလယ် handrest မျှဝေအတူ.
နောက်ထပ်, ဒုတိယတန်းမှခရီးသည်များသည်ပထမတန်းမှအချို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်. ဥပမာအားဖြင့် WI-FI ကိုယူပါ. ဒုတိယတန်း၌, ပထမတန်းစားခရီးသည်များအတွက် Wi-Fi သည်အကန့်အသတ်မရှိပါ. ဒုတိယတန်းစားခရီးသည်များသည်နေ့စဉ်သတင်းစာများကိုအခမဲ့လည်းမရပါ။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယတန်းတွင်သတင်းစာရလိုပါက, သင်တစ်ယောက်ဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်.
အစားအစာမှာယူချင်ရင်ဒုတိယတန်းစားခရီးသည်တွေစားသောက်ဆိုင်ကိုသွားရပါတယ်. ICE ၏ပထမတန်းစားအခန်း၌ရှိသကဲ့သို့သူတို့ထိုင်ခုံများမှအမှာစာမရနိုင်ပါ. လည်း, Flexpreis နှင့် saver ongkos နှစ်ခုစလုံးရှိ ICE ဒုတိယတန်းလက်မှတ်သည်ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားမှုများကိုအလိုအလျောက်မဖုံးနိုင်ပါ. သင်ဒုတိယတန်းတွင်ထိုင်ခုံကြိုတင်စာရင်းသွင်းချင်လျှင်, သင်€6အပိုငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. အလားတူစွာပထမတန်းစားနှင့်ဒုတိယတန်းစားခရီးသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်ထိုင်ခုံတိုင်းတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထွက်ရှိသည်.
Nuremberg Bamberg မှရထား
Bamberg ရထားမှ Frankfurt
Bamberg ရထားမှ Dresden
ICE subscrip ရှိပါသလားမျိုး?
ICE ကမီးရထားလမ်းဖြတ်မှာ စျေးပေါ ICE ရထားစျေးနှုန်းများ ဂျာမနီသို့မဟုတ်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးအကန့်အသတ်မရှိခရီးသွားခြင်းအတွက်. ရထားလမ်းသုံးမျိုးရှိသည်:
ဂျာမန်ရထားလမ်းသည်ဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းအကန့်အသတ်မရှိခရီးသွားရန်ဖြစ်သည်. လည်း, ဥရောပတိုက်တွင်နေထိုင်သောခရီးသွားများအတွက်ဖြစ်သည်, ကြက်ဆင်, နှင့်ရုရှား. ဂျာမနီရထားလမ်း၏အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာပါဝင်သည်:
ရထားလမ်းကိုင်ဆောင်သူများသည်ဂျာမနီပြင်ပရှိအပိုဆုကြေးနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် (Salzburg, ဗင်းနစ်, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်)
အောက်ရှိလူတိုင်းအတွက်အထူးလျှော့စျေးရထားလက်မှတ် 28 နှစ်ပေါင်း
လူနှစ်ယောက်အတူတူခရီးသွားတဲ့အခါ Twin Pas သုံးပြီးပိုက်ဆံအများကြီးချွေတာနိုင်တယ်
ဂျာမန်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများမှရွေးချယ်နိုင်သည်3သို့ 15 Pass တစ်ခုကိုဝယ်ယူစဉ်တစ်လအတွင်းခရီးသွားရက်များ.
Eurail Pass ကို
Eurail pass သည်ရုရှားပြင်ပတွင်နေထိုင်သောဥရောပသားမဟုတ်သူများအားခွင့်ပြုသည်, ဥရောပ, နှင့်တူရကီဥရောပတစ်ဝှမ်းန့်အသတ်သွားလာရန်. တချို့အခွင့်အရေးများပါဝင်သည်:
ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး - လူကြီး, အကြီးတန်း, နှင့်လူငယ်.
ဖြတ်ကျော်ကန့်သတ်ခရီးသွားလာ 31 ဥရောပနိုင်ငံများတွင်, တူရကီအပါအဝင်.
InterRail pass သည်ရုရှားတွင်နေထိုင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, ကြက်ဆင်, သို့မဟုတ်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးအကန့်အသတ်မရှိခရီးသွားခြင်း. ဒီဖြတ်သန်း၏အခွင့်အရေးပါဝင်သည်:
အထူးလျှော့စျေး ICE ရထားလက်မှတ်တွေ အငယ်နှင့်အဟောင်းတွေနှစ် ဦး စလုံးသည်.
မှအကန့်အသတ်မရှိခရီးသွားခြင်း 33 ဥရောပရှိနိုင်ငံများ
အသက် (၂) နှစ်အောက်ကလေးငယ်များနှင့်အတူခရီးသွားသူများအတွက်အခမဲ့ရထားစီးသည် 11 နှစ်ပေါင်း.
ခရီးသွားခြင်းကာလ3ရက်ပေါင်း3တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လ.
Pass တစ်ခုစီကိုရရှိနိုင်ပါသည် 11 ဝယ်ယူလပေါင်းများစွာ.
သင်အချိန်မီရောက်ရှိရန်သေချာစေရန်, နေသားတကျဖြစ်သည်, နှင့်ပင် စျေးဆိုင်ရှာဖွေပါ, သင်အနည်းဆုံးရောက်ရှိရန်အကြံပြုပါတယ် 30 သင်၏ထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီမိနစ်ပိုင်း.
ရထားဇယားများကိုမသတ်မှတ်ထားပါ, အရာကခက်ခဲဖြေဆိုရန်စေသည်. သို့သျောလညျး, သင်သည် Save A Train ပင်မစာမျက်နှာရှိ ICE မီးရထားဇယားများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရယူနိုင်သည်. သင်၏မူလနှင့်နေရာကိုထည့်သွင်းပါ၊ ICE ရထားဇယားများအားလုံးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းရယူပါ. အစောဆုံး ICE ရထားဖြင့်ထွက်ခွာသည်6နံနက်, ရထားတိုင်းထွက်ခွာအတူ 30 အဓိကနေရာများမှမိနစ်.
ဘယ်ဘူတာတွေကို ICE ကတာဝန်ယူတယ်?
ICE အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများသည်နိုင်ငံတကာဘူတာများစွာမှထွက်ခွာသည်, သူတို့တွင်ရှိပါတယ် ဘရပ်ဆဲလ် Midi Zuid (ဘရပ်ဆဲလ် Midi တောင်ပိုင်းဘူတာ), ဗဟို Arnhem, နှင့်အမ်စတာဒမ်ဗဟို, အများအပြားကပို.
ဆိုက်ရောက်ရန်, ICE ရထား ရောက်လာပါ 11 ဂျာမန်ဘူတာနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘူတာတစ်ခု. လည်း, အဓိကဆိုက်ရောက်ဘူတာများတွင် Oberhausen ပါဝင်သည်, Duisburg, Dusseldorf, Cologne, Frankfurt လေဆိပ် (Frankfurt ပင်မလေဆိပ်), မန်းဟိုင်း, Siegburg, နှင့်အခြားသူများ.
နောက်ထပ်, Dusseldorf သည်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့်ခံစားချက်ကြွယ်ဝသောရိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ထင်ရှားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်ဆွဲဆောင်မှုများစွာရှိသည် သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကြီးစွာသောစျေးဝယ်areaရိယာသည်. နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တနင်္ဂနွေထွက်ပြေး သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူ.
အမ်စတာဒမ်ဗဟိုမှ (Centraal သည်ဒတ်ခ်ျဘာသာစကားဖြင့်တည်ရှိပြီးဗဟိုဘူတာကိုဆိုလိုသည်), သငျသညျ Frankfurt ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဥရောပရဲ့ဘဏ္financialာရေးမြို့တော်အဖြစ်လူသိများမြို့. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ရှိပါတယ် လှပသောကမ်းခြေ, ပြတိုက်, နှင့်စားသောက်ဆိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်.
Cologne သည်အနုပညာဗဟိုဖြစ်သည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့် ကြွယ်ဝသောသမိုင်း. Amsterdam Centraal မှ ICE ရထားဖြင့်, သင်သည်ဤမြို့၏လှပမှု၌ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန် Cologne သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်.
တကယ်ပါပဲ, မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ရှိပါတယ်, အချက်အပြုတ်လက်ရာ၏ကျယ်ပြန့နှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်များ, တိရစ္ဆာန်ရုံ, ပြတိုက်, ပျော်မွေ့ရန်အရက်ဆိုင်. လည်း, သငျသညျအဘယျသို့ဘူတာရုံရွေးချယ်ဖို့သေချာမသိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ algorithm ကိုသင်ရွေးချယ်ကူညီပေးပါမည်.
Frankfurt Heidelberg မှရထား
Nuremberg Heidelberg မှရထား
Bonn Heidelberg မှရထား
ICE Trains မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
ငါနဲ့ ICE ကိုဘာတွေယူဆောင်လာသင့်သလဲ?
သင်ကိုယ်တိုင်အပြင်? သင်၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းကိုယူလာပါ, တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, နှင့်ခရီးသွားအာမခံသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သော်လည်းဤစာရွက်စာတမ်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည်.
အဆိုပါ Intercity-Express ကို (ICE) ဂျာမနီရဲ့အမျိုးသားရေးရထားပံ့ပိုးပေးကပိုင်ဆိုင်သည်, အဆိုပါ Deutsche Bahn, နှင့် DB ကိုဂျာမန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှပိုင်ဆိုင်သည်.
ICE သည်ဂျာမနီရှိမြို့ကြီးအားလုံးမှတဆင့်ပြေးဆွဲသည်. အချို့သောနိုင်ငံတကာရှိပါတယ် ICE ခရီးသွားလမ်းကြောင်း ဂျာမနီနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောအချို့သောနိုင်ငံများသို့.
မဆိုဖန်စီဘော်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိပါ. ဘူတာရုံကိုရောက်တဲ့အခါ, သင့်ရထားကိုရှာရန်ညွှန်ပြသည့်ဘုတ်များကိုစစ်ဆေးပါ. ထို့အပြင်, ထို့နောက်သင်ကမထွက်ခွာမီအချိန်မရွေးရထားပေါ်တက်နိုင်သည်.
ICE ရထားသည်မီနူးတွင်အစားအစာများပါ ၀ င်သောထမင်းစားခန်းတွင်ကမ်းလှမ်းသည်, အလင်းမုန့်များ, နှင့်အမျိုးအစားအားလုံး၏အဖျော်ယမကာ. ထို့အပွငျ, တိုင်းထိုင်ခုံဘေးမှာဆိပ်ကမ်းများအားသွင်းနေကြသည်, အခမဲ့ Wi-Fi (ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားအတွက်န့်အသတ်), နှင့်မပြတ်မတောက်ဆဲလ်ဖုန်း reception ည့်ခံများအတွက်အသံချဲ့စက် (ပထမတန်းစားအတွက်သာ).
တောင်းဆိုထားသော ICE မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – ICE မှာကြိုတင်စာရင်းသွင်းရမလား?
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်မလိုပါ, သင်လိုလျှင်ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်သည်. သင်ပထမတန်းစားလက်မှတ်ဝယ်ယူလျှင်, အခမဲ့ယူထားသောထိုင်ခုံအတွက်သင်အလိုအလျောက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်.
ICE ထဲမှာ WiFi အင်တာနက်ရှိလား?
ဟုတ်ကဲ့, ရှိသည်. ဒုတိယလူတန်းစားအခန်း၌တည်၏, WI-FI အင်တာနက်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပထမအမျိုးအစား၌ရှိသော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိ.
Konstanz Lindau မှရထား
Lindau ရထားမှ Memmingen
Lindau ရထားမှ Biberach
Lindau ရထားမှ Ulm
နောက်ဆုံး, သင်ဤဝေးရောက်ရှိလျှင်, သင် ICE ရထားတွေအကြောင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုသင်သိပြီးသင်၏ ICE ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည် SaveATrain.com.
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.